Cirbixiyeeno Ku Sugan Hawada..Maxey Ka Dhaheen Karoona? | Xaqiiqonews
Cirbixiyeeno Ku Sugan Hawada..Maxey Ka Dhaheen Karoona?
Labo cirbixiyeen Mareykan ah oo ku sugan hawada, ayaa qorsheynaya in dib ugu soo laabtaan dhulka, ka dib muddo 9 bilood ah oo ay halkaasi ku suganyihiin.
Inkastoo ay ku karantiilnaayeen hawada, waxa ay aaminsanyihiin in ay wili ku sii jiri doonaan karantiil marka ay dhulka ku soo laabtaan, madaama meelo badan oo dunida laga hirgeliyey shuruuc adag oo ka dhan ah fayruska karoona.
Andrew Morgan oo ah cirbixiyeen ka tirsan NASA ayaa sheegay in uu hawada kala socday wararka la xariira Karoona fayrus, isaga intaasi raaciyey in uu filanaayo in uu xaqiiqda indhihiisa ku arko isaga iyo kooxdiisa marka ay ku soo laabtaan dhulka.
Sidoo Kale Aqri.. Cudurkan Waa Kan Ugu Badan ee Ay U Dhintaan Cirbixyeenada
Jessica Mir oo ah cirbixiyeenad ka tirsan NASA ayaa tiri “wey adagtahay in aan rumeysano isbadaladii dhulka ka dhacay intii aan hawada ku maqneen, “waana adagtahay xaqiiqda ah in aan dareemi doono kalinimo la mid ah tii hawada aan ku soo aragnay” ayey sii raacisay.
Cirbixiyeenadan oo hawada u baxay bilihii May iyo Sibteembar ee sanadkii tagay, ayaa lagu wadaa in ay dhulka dib uga soo laabtaan iyaga oo la socda markab-cireedka Soyuz, waxaana la socda cirbixiyeenka Ruushiyaanka ee lagu magacaabo Oleg Skrybushka.